Garda Sergilenen Buharlı Lokomotif Kara İnci Onarılıp Boyandı - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး03 AfyonkarahisarGarda က Black ပုလဲခြယ်ခဲ့သည် display ပေါ်မှာရေနွေးငွေ့ခေါငျးပွနျလညျထူထောငျ
10 / 07 / 2014 Levent Ozen 03 Afyonkarahisar, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Garda က Black ပုလဲ display ပေါ်မှာရေနွေးငွေ့ခေါငျးပွနျလညျထူထောငျခြယ်ခဲ့သည်: Dinara အဆိုပါမီးရထားဘူတာနှင့် "Black ကပုလဲ" ၏ရထားဘူတာရုံŞefliğinမှာပြသရေနွေးငွေ့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းပြုပြင်နှင့်ပန်းချီစစ်ဆင်ရေး၏ 87 နှစ်ပေါင်းဟုခေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
Gara ချုပ်သည်ရှောလမုန် Senturk, စက်ခေါင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, တဖန်ပြခံရဖို့ကပြောသည်မီးရထားကအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်ဟုပြောသည်။
Dinar ကြောင့်ခရီးသွားဧည့် Senturk ထံမှပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားအဓိကထားတဲ့ "Black ကပုလဲ" ၏သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, said:
"ဒါ့အပြင်ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များတွင်အသုံးပြုကျွန်ုပ်တို့၏ဘူတာလည်းအဟောင်းတစ်နှစ်အချို့အတွက်ပြသထားပါသည်။ Dinar ရထားလမ်းလူသားများအတွက်အဓိကသမိုင်းဝင်အပုဒ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အသစ်စုံတွဲများလက်ထပ်ကပျော်ရွှင်အချိန်လေး Dinara မီးရထားဘူတာသို့ လာ. ဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကျနော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲဒီနေရာမှာအားလုံးကိုပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းနှင့်ရှေးဟောင်းကြိမ်ထိန်းသိမ်းရန်။
သူကအိုးအိမ်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန် Burdur ဘူတာ '' Black ကရထား '' MU အတွက်ပြ? 21 / 03 / 2019 နှစ်ပေါင်းစောင့်ဆိုင်း Burdur ခရီးသည်တင်ရထားမီးရထားဘူတာမှာ display ကိုအပေါ်တစ်ဦးရေနွေးငွေ့ခေါငျးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းမွို့၌မီးရထားဘူတာရုံပြောင်းရွှေ့ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လည်းရှိရာကနေဖယ်ရှားခံလူထုကြေညာချက် '' မြေယာရထား "နဲ့ရထားလမ်းရေနွေးငွေ့ရထားခေါငျးဖျက်သိမ်းရေး၏အစီအစဉ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု? အဆိုပါ 1825 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအင်္ဂလန်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်နှစ်ပေါင်းဥရောပတစ်လျှောက်လုံးရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ 25 ကျော်ကမ္ဘာတဝှမ်းပြန့်နှံ့, အော်တိုမန်အင်ပါယာများစွာကိုနည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးအစောပိုင်းသို့ ဝင်. မလှယျကူသော်လည်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဆိုး၏စက်ခေါင်းနှင့်လှည်းထားခြင်း၏မီးရထားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းပေါ်လိမ့်မည်, ကကာလ၏အမြင့်ဆုံးနည်းပညာကိုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်, Anatolia အတွက်ပထမဦးဆုံး ...
Burdur ယူခေါငျးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဘူတာရုံများတွင်ပြသနေ့စွဲ 06 / 11 / 2013 လေထုညစ်ညမ်းမှုဖို့ပြသရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းရဲ့လျစ်လျူရှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ TCDD ဘူတာရုံအဆောက်အဦ, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအစီရင်ခံစာများတွင် ပို. ပို. ဒီşekliyle TCDD Burdur ဘူတာဌာနချုပ်ဖော်ပြချက်ထဲမှာအပိုင်းအစအမြင်ပေး၏ "Burdur သတင်းစာအားဖြင့်ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်လိမ့်မည်: ဘူရွန်ဒီရထားလမ်းဘူတာရုံမှာ display ကိုအပေါ်သမိုင်းဝင်ခေါငျးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုယူထားပါတယ် 24 သြဂုတ်လ 2013 "display ကိုအပေါ်သမိုင်းဝင်ခေါငျးဖြစ်ပါတယ်?" အမည်ရဆောင်းပါးနှင့်ယခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုထိုက်တန်ခေါငျးအောင်ဘူတာရှေ့တွင်ပြသခံရဖို့ရေနွေးငွေ့ခေါငျးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ပုံရိပ်တွေတည်ရှိသောပေးသောတူရကီပြည်နယ်မီးရထားရထားအခြားဆောင်းပါးများထုတ်ဝေခြင်း, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောင်တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဖော်ပြထားသည်။ သတင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး-na ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်း၏နောက်ဆက်တွဲထုတ်ဝေ ...
သတ္တုရထားလမ်း Kocaeli စိမ်းနဲ့အဖြူထဲမှာခြယ်ခဲ့သည် 22 / 08 / 2019 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအဟောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့နှစ်သိမ့်ယူလာနှင့်အမြင်ပျက်စီးနေအပိုင်းနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်နေသည်၏ superstructure အလုပ်တစ်ကြိမ်။ တမြို့လုံးရလဒ်များနစ်မြုပ်သည့်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ပေးသည်သောလမ်းဆုံမြေပေါ်နှင့်လမ်းဘေးအပေါ်ပန်းချီဖိတ်ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း, ဦးစီးဌာနသမားတွေအားဖြင့်မြို့တော်၏သံချေးတက်သတ္တုရထားလမ်းပန်းခြံဥယျာဉ်နှင့်စိမ်းလန်းဧရိယာစိမ်းနဲ့အဖြူအဆင်းအရောင်နှင့်ကော်ပိုရိတ်အဆင်းအရောင်နှင့်ခြယ်သခဲ့ကြသည်။ Izmit ၏ခရိုင်အတွင်းရှိ Beauty မြေပေါ်လမ်းဆုံ, ကထွက်လှည့်နစ်မြုပ်, guardrails အားဖြင့်ခြယ်သခြင်းနှင့်လမ်းဘေးအဖွဲ့ကမြေပေါ်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းနောက်တဖန် Izmit သံမဏိမြေပေါ်အတွက် SEKA Park မှာနှစ်သင်းတို့က ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှု Polatli Garda ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် 21 / 05 / 2013 Polatli Garda သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုများဘူတာ, နှစ်များတွင် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) Polatli YHT ဒေသန္တရရုံးဓာတ်လှေကားသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ လှေကားကား။ တံခါးရွက်နှစ်ရွက်, ဘွိုင်လာ, ရေတိုင်ကီ, စွန့်ပစ်ရေစမ်းသပ်။ အဆိုပါအပူ-စုပ်ယူမှုမျှော်စင်။ အခိုးအငွေ့။ , လေအေးပေးစက် Santa ။ , မီးစက်ကမီးအခိုးအငွေ့။ , မြေလျှပ်စီးကိုစမ်းသပ်။ ကာနှစ်စဉ်သည် Periodic လျှပ်စစ်ပြား၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ , ဝန်ဆောင်မှုမြန်နှုန်း။ ကျနော်တို့ကတင်ပြ။ ကိုပြု၏။ အမှတ် 4734 ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 60623 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Talatpasa Boulevard ဘူတာ / တူရကီဘူတာALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3123090575 က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Pozantıအဆောက်အအုံအာူးနှင့်ပြုပြင်ခြင်း Garda Yaptırılacaktırအလုပ်လုပ် 09 / 05 / 2018 Pozantıအဆောက်အအုံအာူးနှင့်ပြုပြင်ခြင်း Garda Yaptırılacaktır TCDD6အလုပ်လုပ်။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်ဒေသန္တရရုံးPozantı Garda 24 25 Plan ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦးအမှတ်ကို Maintenance-ပြုသောအမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်နှင့်ပြုပြင်၏အားကောင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 207609 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-ဘာသာရပ် ...
မြောက်အမေရိက Marmara ကားလမ်းစီမံကိန်း Yavuz Sultan Selim မကြာမီ BOT စနစ်မော်ဒယ်နူးညံ့သောလမ်းများကိုဆက်သွယ်ထားသောတံတားများအတွက်ကြေငြာသွားမည်
Gumushane - Bayburt လမ်းဆုံ - ကျိုး - Kelso ပြည်နယ်လမ်းမကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းPekünအနိုင်ရကုမ္ပဏီများမှလေ့လာမှုများနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်တင်ဒါကြေညာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်
သူကအိုးအိမ်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန် Burdur ဘူတာ '' Black ကရထား '' MU အတွက်ပြ?
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှု Polatli Garda ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်